Immisa Sharciga Sharci dejinta ee federaaliga ah? | qareenka warshadaha cannabis
Heerka Sharciga Sharci dejinta ee Federaalka 2019
Immisa Biilasha Sharci dejinta ee Golaha Aqalka Sare?
Ugu yaraan 8 biilal ayaa ku jira Kongareeska hadda si sharci ah loogu sharciyeeyo marijuana, laakiin inbadan ayaa lagu soo bandhigayaa maalin kasta oo dhaafaysa. Qaansheegadka ugu muhiimsan ee la daawanayo waa: SHARCIGA Sharciga, SAFE Banki, Sharciga Cadaaladda Marijuana, Sharciga Dib U Eegista, SECA, iyo Sharciga DARYEELKA
Qaar badan oo ka mid ah Biilasha sharci darrada marijuana iyaga oo ka shaqeynaya howsha loo maro hoolka koongareeska waxay u dhacaan laba kooxood - jadwalka, ama kooxaha xuquuqda gobolada.
Our Qareennada Cannabis aaminsanahay Biilasha Xuquuqda Mareykanka ee Koongarasku inay tahay mid aan dastuuri ahayn, kana waxtar yar tahay, biilasha ka dhaca Kongareeska ee soo jeedinaya in laga tuuro marijuanaana sharciga Maandooriyaha La Maareeyay. Waxaan si kooban ula taaban doonaa Sideed Biil oo looga wada hadlay fiidiyaha kore, hoosta.
U wac Qareennada Ganacsi ee Xashiishkaaga arrimaha la xiriira arrimaha Sharciga Federaalka
Haddii aad rabto inaad ku korto hemp ee Illinois - buuxi wareerka bot ee websaydhkan - ama wac qareennadayada cannabis maanta (309) 740-4033
Thomas Howard wuxuu ganacsi ku jiray sanado wuxuuna kaa caawin karaa inaad adigu u gudubto dhanka faaiidada badan ee biyaha. Isaga u wac maanta kuna saabsan ganacsigaaga xashiishadda ee hemp ama marijuana oo ku taal Illinois.
Thomas Howard wuxuu ku jiray kubbada wuxuuna qabtay waxyaabo. Way fududahay in lala shaqeeyo, si fiican ayey ula xiriirtaa, oo waan kula talin lahaa markasta.
Heerka Sharciga Sharci dejinta ee Federaalka - 2019
2019 wuxuu arkay Kongareeska ugu saaxiibtinimada cannabis taariikhda illaa iyo markii uu furay kalfadhiga 116aad (kalfadhi kasta oo ka tirsan Golaha waa 2 sano). Waxaan xaqiiqsan nahay in sharciyeynta marijuana ay ka dhowdahay sidii hore, laakiin maysan waligeed bilownin qaanuunka sharci dejinta ee federaalku, waxaan ku bilaabeynaa biil wanaagsan, kaasoo leh fursadda ugu wanaagsan ee lagu gudbo laguna noqdo sharci.
Xeerka Bangiga SAFE - ee Koongareeska
Waxaan mar horeba si aad ah ugu qornay sharcigii sharci-dejinta marijuana ee ugu guulaha badnaa abid ee ka dhaca Koongaraska Xeerka Bangiga SAFE.
Markaa si dhakhso leh ayaanu u soo celin karnaa. Sharciga SAFE Banking wuxuu qeexayaa eray cusub oo farshaxan sharci ah, "ganacsiyada sharciga ah ee la xiriira xashiishadda" wuxuuna u furayaa adeegyada maaliyadeed. Waqtigan xaadirka ah, dambiyo badan oo federaal ah ayaa ka horjoogsanaya shirkadaha ka ganacsada cannabis-ka sharciga ah inay galaan akoonnada akoonnada.
Sheeko dhaadheer, garsoorka SAFE ayaa wax walba hagaajinaya si ganacsatada sharciga ah ee xashiishadda cannabis ay u bareeraan sida ganacsi kale oo dhan ugana fogaadaan liiska dharka lagu dhaqdo ee ka imanaya qabashada howlahaaga ganacsi wax aan ahayn laakiin lacag caddaan ah oo adag oo u baahan amni, hub. ilaalada iyo dhibaatooyinka kale ee xisaabinta ee akoonnada bangigu ka caawiyaan sidii looga badbaadin lahaa.
SHARCIGA SHAQAALAHA - Sharci sharci darro ah xashiishadda Cannabis ee dastuuriga ah
Xoojinta Isbadalka tobnaad iyada oo loo marayo Dowladaha Aaminaadda (STATES) ee Golaha Koongareesku waxay iftiimineysaa laba xaqiiqo oo muhiim ah oo ku saabsan Golaha oo dad badani iska indhatiraan:
Koongarasku wuxuu soo bandhigayaa sharciyo dastuuri ah had iyo jeer, iyo
Koongarasku waxay jecel yihiin inay magacaan biilasha ekaanta erayga
Sharciga STATES wuxuu wax ka beddelay sharciga maandooriyaha ee la xakameeyay si loo abuuro howsha hoyga ah ee qawaaniinta gobolka ee dadka u diidaya xuquuqdooda wax ka beddelka 14-aad ee xuquuq siman ee sharciga. Wax ka beddelka 14-aad wuxuu yimid dagaalkii sokeeye ka dib si looga hor tago in gobollada qaarkood ay takooriyaan dadka iyo in loola dhaqmo si ka duwan sharciga.
Cannabis Koray Koongareeska
Under ah Xeerka dalalka, qof ku sugan gobolka in marijuana sharci ah ay ku raaxeysato marijuanaato sharci ah heer federaal ah, laakiin qof ku sugan waddan marijuana sharci darro ah lagu ciqaabi doono heer federaal isla sharcigaas oo kale. Sababtaas darteed, muwaaddiniinta waxaa loola dhaqmayaa sharciyada kaladuwan ee dambiyada heer federaal iyadoo lagu saleynayo gobolka ay ku nool yihiin - a / k / a XAQIIQOOYINKA waa sharci-darro dastuuri ah xuquuqda aad u leedhay badbaadin la mid ah shuruucda sidaas darteedna badankood biilasha kale ee sharciyada sharci dejinta ee federaaliga ah ee shirweynaha.
S. 420 - Sharciga Dakhliga iyo Xeerka Marijuana
Sharciga Dakhliga iyo Sharciga Xaddiga Marijuana wuxuu ka takhalusaa marijuanaadka Sharciga Maandooriyaha La Maareeyay (CSA), ka dib wuxuu abuuraa qaab guud oo loogu sameeyo dakhli canshuurta laga helo iibinta marijuana ee dowladda federaalka. Intii aan joognay CannabisIndustryLawyer.com Waxaan taageernaa qorsheynta xashiishadda ee loo yaqaan 'CSA', ma doonayno wax canshuur ah oo federaali ah waxaanan door bidnaa shakhsiyaadka gobolka ka soo gala canshuurta cannabis. Gobollada waxay u baahan yihiin dakhliga ka badan dowladda federaalka, gaar ahaan gobollada bartamaha-galbeed, sida Illinois.
Wax ka beddelidda Maandooriyaha Sharciga Maandooriyaha Marijuana
Hal shay oo ay ku soo bandhigaan dhammaan biilasha sharci-dejinta ee federaalku waa in loo beddelo CSA - oo ah sharci ciqaabiyey dhammaan xashiishadda tan iyo 1970, kaas oo wax laga beddelay dhammaadkii 2018 si looga saaro hee-ka ka madax-bannaan ee THC. Ilaa iyo markaa, dhammaan cannabis waxaa loola dhaqmay sidii inay tahay xashiish…. Kuwaas oo magacyo badan oo kala duwan u leh muusikada muusikada, sida jive, ama reefer, taas oo noo keenta biilka soo socda ee Congress-ka si aan u sharciyeeyo marijuana.
Sharciga Dib-U-Eegista - Xakamaynta Dhaqangelinta Sharciga Federaalka ee xad dhaafka ah
Reefer wuxuu ahaa eray Cab Calloway loo isticmaalay marijuanaana heeskiisii ​​caanka ahayd 1933, "Reefer Man". In ka badan 80 sano ka dib, Koongarasku wuxuu mar kale u adeegsanayaa shirweynaheedii caanka ahaa ee abuurista erey eray bixin ahaan loogu magac daray qaansheegteedii - oo ay la socoto Sharciga Dib-u-celinta.
The Sharciga Dib U Eegista waxay la mid tahay sharciga STATES taas oo ah inay awood siiso gobolada inay lahaadaan shuruucda marijuana u gaarka ah.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa sharci dastuuri ka yar Xeerka SAXIIXYADA sababta oo ah Sharciga Dib-U-Eegida wuxuu difaacayaa dowladda federaalka inay ku dhaqan galiso sharciyadeeda xashiishadda kana soo horjeedo wixii sharciyada kale ee gobolka ay sameeyeen. Tani waa mid aan dastuuri aheyn maxaa yeelay Koongarasku wuxuu xaq u leeyahay inuu qoondeeyo lacagaha jira ee lagu dhaqangelinayo shuruucda, iyo shuruucda federaalka looma baddali doono inay u sinnaadaan sida ay dhigayaan sharciga XEERKA.
TL; DR = SHAQIIJINTA SHAQAALKA> XAQIIQOOYINKA SHARCIGA, laakiin ma aha sharciyeyn buuxda, waxaad u baahan tahay
Sharciga cadaalada ee Marijuana ee 2019
The Xeerka ciqaabta Marijuana (Sharciga MJ) waa biilka Cory Booker oo qayb ka ah sharcigiisa Tallaabada xigta, laakiin wuxuu sidoo kale u muuqdaa biil u gooni ah kaligiis. Sharciga Tallaabada xigta waa hawlgal sharci dejin ballaaran ah, sidaas darteedna jebinaya Sharciga MJ
Sharciga MJ ma ahan oo keliya inuu si buuxda u sharciyeeyo marijuana isagoo ka tuuraya CSA, laakiin wuxuu sii wadaa inuu wax ka qabto dibuhabaynta garsoorka dembiyada ee lagama maarmaanka u ah 80 sano ka dib siyaasadaha masiibada ah ee ku dhaawacay dadka iyagoo dambi ka gala maandooriyaha, ama dhirtu markay tahay marijuana. Sharciga MJ wuxuu kaloo ku baaqayaa in si otomaatig ah looga tirtiro dambiyada marijuana!
Waxay u saamaxi doontaa maxaabiis fara badan oo federaal ah inay codsadaan dhimista xukunnadooda sidoo kale waxay gacan ka geysataa soo celinta kuwa ku dhaawacmay sharciyada xashiishadda xun bulshada.
Sharciga MJ ayaa ah biilkayaga aan ugu jecel nahay dhamaantood gudaha Koongareeska (waxaan kaloo taageersanahay Sharciga Tallaabada xigta ee ay kujirto MJ Act), ayuu yiri Nuff.
Sharci-dejinta Sharci dejinta ee Golaha
Waqtigaani waa waqtiga ugu firfircoon ee shuruucda marijuanaada heer federaal ah ku dhawaad ​​konton sano markii CSA kacday, laakiin hadda xeerarka la soo jeediyay ayaa dhammaantood ka hadlaya xaqiiqada na hor taal. Sharci-dejinta Marijuana waxay u shaqeysaa gobollada isku deyey wax badan, aad uga wanaagsan daaweynta marijuana sida maandooriyaha 'heroin' marka loo eego sharciyada daroogada federaalka.
by Lauryn | Sep 22, 2020 | Xashiishadda Indiana, Shuruucda Gobolka
Xashiishadda Hindida ee Indiana sharciyadeeda xashiishka ayaa ka mid ah kuwa ugu adag Ameerika! In kasta oo deriskooda ku nool Illinois ay kor u dhaaftay $ 63M iibka xashiishadda bishii Ogosto, macaamiisha Indiana waxay wajihi karaan hal sano oo xabsi ah oo keliya hal wadar. Indiana NORML waxay nagu soo biirtay ...